HALKAAN KA AKHRISO WAA WARARKA WARGEYSKA MOGADISHU TIMES DAILY NEWS PAPER E EE MAANTA OO AH AXAD 12-KA JANNAAYO 2020-KA
Sunday January 12, 2020 - 11:56:14 in Wararka by Mogadishu Times
WAR MURTIYEED LAGA SOO SAARAY KULANKII FARMAAJO IYO AFWERKI Madaxtooyadda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay kulankii dhexmaray Mada xweynaha Soomaaliya iyo Madaxweynaha Eritrea, waxaana ay soo saareen War wad ajir ah oo siddan u qorn aa: Madaxwey
WAR MURTIYEED LAGA SOO SAARAY KULANKII FARMAAJO IYO AFWERKI Madaxtooyadda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay kulankii dhexmaray Mada xweynaha Soomaaliya iyo Madaxweynaha Eritrea, waxaana ay soo saareen War wad ajir ah oo siddan u qorn aa: Madaxweyna ha J/F/Somaliya Md. Maxamed C/hi Maxamed ayaa booqd ay dalka Ereteriya muddadii u dhexaysay 10ka ilaa 11ka bisha Jannaayo ee 2020, ka dib martiqaad rasmi ah oo uu ka helay Md. Isaias Afwerki.
Intii lagu gudajiray booqashada, 2da Madaxweyne waxa ay yeesheen wadahad allo qotadheer oo ku aaddan xiriirka 2da dhinac iyo arrimaha Gobolka, gaar ahaan danaha wadajirka ah ee labada dal.
2da Madaxweyne waxa ay iyaga oo ku qanacsan isla qireen koboca ballaaran ee ku yimi iskaashiga labada dhinac laga soo bilaabo heshiiskii wadajirka ahaa ee ay ka la saxiixdeen bishii July 29, 2018, kaasi oo ku qotomay saaxiibtinnimada iyo Iskaashi ga loo dhan yahay.
2da Madaxweyne waxa ay sidoo kale bogaadiyeen horumarka laga sameeyay iskaashiga u dhexeeya Soomaaliya, Eriteri ya iyo Itoobiya oo ku salaysan Heshiiskoo dii 3geesoodka ahaa ee bishii Sept ember, 2018.
2da Madaxweyne waxa ay hoosta ka xarriiqeen in, ka sokoow caqabado iyo dhi baatooyin dabadheeraaday, xaaladda go bolku ay tahay mid suurtagelinaysa in la helo iskaashi waara oo waxtar leh oo ka dhaca Geeska Afrika.
Madaxweyne Isaias iyo Madaxweyne Maxamed waxa ay mar labaad ballanqaad een xoojinta dadaalkooda ku aaddan in la dardargeliyo Heshiiska Saddexgeesood ka ah iyo guud ahaan iskaashiga Gobolka.
Xaaladda Soomaaliya, labada Madaxwe yne waxa ay bogaadiyeen horumarka la ta aban karo ee la gaaray, iyaga oo isla mar kaana tilmaamay in dib u dhiska buuxa ee Soomaaliya aan weli la gaarin meeshii la ga doonayay.
Tani waxa ay ugu horraynta u baahan tahay yagleelidda hay’ado dowladeed oo xooggan isla markaana waxkuool ah si da hay’addaha difaaca iyo amniga, iyo s idoo kale dib u soo noolaynta dhaqaalaha dalka iyo kaabeyaasha bulsho.
Sidaasi si lamid ah, waxa ay isku afga rteen inay labolaabaan dadaalka lagu xo ojinayo madaxbannaanida, nabadgelyada iyo ammaanka Qaran ee Soomaaliya iyo in sare loo qaado horumarka dhaqandhaq aale ee Soomaaliya.
2da Madaxweyne waxa ay dhammaan sa axiibbada Soomaaliya iyo Gobolka ugu ba aqeen inay taageeraan go’aanka Soomaal iya ee ku saabsan qorsheynta arrimaha hortabinta u leh iyo inay xoojiso hay’adahe eda qaran iyo awooddeeda.
Madaxweyne Maxamed C/hi waxa uu Madaxweyne Isaias uga mahadceliyay ma rtisoorkiisa iyo garab istaagga joogtada ah ee Ereteriya la garab joogto Soomaaliya.
Waxaa lagu soo saaray Asmara, Ereteri ya 11ka Jannaayo 2020
MAXKAMADA GOBOLKA MAROODI JEEX OO TIFAFTIRIHII TELEFISHANKA HCTV CABDIQAA DIR CODEY XUKUN KU RIDAY
Suxufi Cabdiqaadir Cismaan Casayr (CabdiqadirCoday) ayaa Shalay maxka madda G/Maroodi jeex ku xukuntay 1san no oo xarig ah iyo 3Milyan oo Somaliland shilingoo ganaax ah.
Wariye Cabdiqaadir Codey ayaa ah tif aftiraha Telefishanka HCTV waxaanu mu ddo laba bilood ku dhow ku xidhnaa xarun ta Dambi baarista ee M/Hargeysa, waxaa na lagu haystay 2war oo laga baahiyey tel ifishankaaasi. Muddadii uu xirnaa Cabdqa adir Coday dhawr goor oo is xig xiga ayaa xanuun loo geeyay Dhakhtarka .
SENATORRADA AQALKA SARE OO LA HORGEEY AY SHARCIGA DOORASHOOYINKA QARANKA
Senatorrada Aqalka Sare ee baarla maanka Soomaaliya ayaa Shalay la horg eyay sharciga doorashooyinka Qaranka kaasi oo ay marsiiyeen aqrinta koowaad.
Laba todobaad ka hor ayaa guddoomiya ha golaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullahi sha rciga doorashooyinka Qaranka u magaca abay guddi senatorro ah oo ka koobnaa todoba xubnood.
Guddiggaan ayaa shaqadooda aheyd sharcigaan isla markaana isku daba rida ya aragti waliba oo ay ka dhiibtaan senato rada. 27kii bisha December ayaa waxaa meel mariyay sharciga doorashooyinka Qaran ka oo ay soo diyaarisay wasaarad da arri maha gudaha ee xukuumadda Soo maali ya, golaha shacabka ee baarlamaan ka Soomaaliya, kaddib markii muddo laba 7aad ah ay ka doodayeen sharcigaan.
KOOX HUBEYSAN OO GOOR DHAW SARKAAL CIIDAN KU DISHAY MUQDISHO
Taliye ku xigeenkii Nabad Sugidda ee G/Sh/Hoose ayaa Shalay lagu lagu dilay M/Muqdisho ee caasimadda dalka.
Taliyaha waxaa Xaafadda Taleex ee degmada Hodan waxaa ku toogtay kooxo ku hubeysan baskoolado oo la rumeysan yahay inay ka tirsan yihiin dagaalamay aasha AlShabaab.
Taliye ku xigeenka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Dhaayow Cusmaan Aadan, waxaana la sheegay inuu maalmo uun joogay magaalada Muqdisho.
Dhaayow ayaa horey uga tirsanaan jiray Maxkamadihii Islaamiga ee muddo 6 bil ah maamulayey koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, wuxuuna hadda ahaa Taliye ku xigeenka hey’adda Nabad sugidda ee degmada Qoryooley.
Kooxihii dilka geystay ayaa la sheegay inay isaga baxsadeen goobta, waxaana daqiiqado kadib goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda kuwaas oo goobta ka sameeyey baaritaano ay ku baacsanayaan dableydii dilka geysatay.
XAAF OO CAMBAAREEYAY XILDHIBAANADII LOOGA DHAWAAQAY DHUUSAMAREEB
War Saxaafadeed kasoo baxay Xafiis ka Madaxweynaha Galmudug ayaa lagu sheegay in lala xisaabtami dooni cidii soo saartay Liiska xildhibaanada been abuur ka ah ee Dorraad looga dhawaaqay Dhuusa mareeb.
XEER ILAALIYAHA GUUD EE PUNTLAND OO MA XKAMADA SARE UGUDBIYAY CODSI KU AAD DAN IN LA QISAASO RAGGII KUFSADAY OO DIL AY CAA'ISHA ILYAAS
Xeer ilaaliyaha guud ee Puntland, Max amuud Xasan Aw Cusmaan ayaa shee gay inay Shalay maxkamada sare ku war eejiyeen dhaxal koobka marxuumad Caa’ isha Ilyaas Aadan, oo ahayd gabadh 13jir ah oo loo geystay kuf si iyo dil ka dhacay Gaalkacyo, bilowga sannadkii hore.
Qoraalka dhaxalkoobka oo ka yimid qoyska marxu umad Caa’isha Ilyaas Aad an ayaa lagu caddeeyay in ay qoyska ay codsanayaan in loo qisaaso raggii ka dam beeyay kufsiga iyo dilka loo geystay gaba dhooda.
Xeer ilaaliyuhu wuxuu saxaafada ka sheegay in qoraalkaan ay markii hore fila yeen in uu maxkamada sare horyaalo, bal se haddii iyaga la sugayay ay Shalay gud biyeen isaga oo dhameystiran.
Aabbaha dhalay Caa’isha Ilyaas ayaa horey warbaahinta uga sheegay in uusan ku qancidoonin wax aan ka ahayn in loo qisaaso dambiilayaasha gabadhiisa kufs aday oo dilay.
Maxkamada sare ayaa hadda laga suga yaa inay kiiskaas fuliso, iyadoo hadda ay muuqato in ay arrintu kasoo dhamaatay maxkamadaha iyo qoyska dhibbanaha, la na sugayo in la qisaaso dambiilayaasha.
2 ka mid xukumanayaasha sugaya in cadaalada lagu fuliyo, waa walaalo waxa ana lagu kala magacaabaa Cabdisalaan Cabdiraxman Warsame iyo Cabdifataax Cabdiraxmaan Warsame, halka midka 3na lagu magacaabo Cabdishakuur Maxamed Dige.
ERGOOYIN KUSII QULQULAYA GAALKACYO KA DIB SHIRKII XAAF KU DHAWAAQAY
Qaar ka mid ah beelaha degaanada ma amulka Galmudug ayaa ergooyin u diray M/Gaalkacyo oo Madaxweynaha Galmud ug Axmed Ducaalle Geelle Xaaf uu kaga dhawaaqay dhismaha maamulka Galmud ug.
Saacadihii lasoo dhaafay ayaa M/Gaalk acyo waxaa gaaray qaar ka mid ah Oday aasha dhaqanka degaanada Galmudug oo kasoo horjeestay xildhibaanadii Dorraad looga dhawaaqay M/Dhuusamareeb.
Qaar ka mid ah Guddiga doorashooyin ka Galmudug ee dhanka Xaaf ayaa she egay inay bilaabi doonaan Shaqooyinka loo idmaday, waxaana ay sheegeen in ay san aqoonsaneyn Xildhibaanada looga dh awaaqay Dhuusamareeb. Madaxweyn aha Galmudug ayaa shee gay in M/ Ga alkacyo ay taallo gogol lagu dhisaayo Ga lmudug loo dhan yahay, isla markaana dowladda dhexe ee Soomaaliya ay haree rmartay dhismaha Galmudug.
Khilaafka ka taagan dhismaha Galmud ug ayaa xoogeystay maalmihii ugu damb eeyay ka dib markii la badalay qaar ka mid ah Odayaashii Saxiixayeyaasha Galmud ug.
XASAN ROOXAANI”IRAN WAXAY AAD UGA QO OMAMAYNAYSAA QALADKAN MUSIIBADA AH”
Ciidanka kacaanka Iran ayaa waxay sheegeen in "si aan ula kac ahayn oo ka m,a ah ” ay u soo rideen diyaarad rakaab oo laga lahaa Ukraine ka dib markii ay uga shakiyeen duqeymo xilligii Iran ay duqeys ay Saldhigyadda Mareykanka ee Ciraaq.
War kasoo baxay dowladda ayaa lagu yiri "khalad uu bina’aadam sameeyay ” ay aa ku dhacay Di yaarradda.
Dowladda wa xa ay sheegtay in Dadkii masuul ka ka ahaa ayaa lala xisaabtami doonaa. "Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran waxay aad uga qoomamaysaa qaladk an musiibada ah,Fikradayda iyo ducada ydu waxay aadaan dhammaan qoysaska murugaysan” ayuu Madaxweyne Hassan Rouhani ku soo qoray Twitter.
Iran ayaa horey u diiday warar sheegay ay in diyaaradda ay soo dhacday ka dib markii uu haleelay gantaal ay Iiraan riday.
Diyaarad nooceedu yahay Boeing737 oo ay saarnaayeen ku dhawaad 180 qof oo ku burburtay meel aan ka fogeyn caas imadda Iran ee Tehran ayaa waxa la shaa ciyey halka ay ka soo jeedaan rakaabkii saarnaa.
11 Ukrain, oo ay ka mid yihiin shaqaalaha diyaaradda.
3 u dhalatay German
XASAN AADAN SAMATAR: "DALKA HADDUU BURBURAY FANKIINA WUU BURBURAY”
Iyadoo meel gabagabo ah uu marayo dayactir lagu sa meey ay tiyaatar ka Qaran ka oo ku burburay dag aaladii dalka ka dhacay, kaddib markii Madaxweyne Maxa med C/hi Maxamed (Farmaajo) xarigga ka jaray mashruuc la magac baxay ‘Isxilqaan’ oo dhismihiisa ay ka qeyb qaateen sha qaalaha Dowladda dhexe ee federaalka ayaa waxaa la filayaa in dhowaan uu dib u howl bilaabo.
Fannaanka caanka ah ee Sooma aliye ed Xasan Aadan Samatar oo ka tirsanaa kooxda hoballada Waaberi isla markaana 70tameeyadii isaga iyo ku guuleystay tar tanka heesaha hirgalay ee lagu qabtay xa runta Tiyaatarka Qaranka ayaa ka sheek eeyay xog muhiim ah oo ku saabsan qiim aha uu fanku ku lahaa dalka gudihiisa iyo dibadiisa.
Fannaan Xasan Aadan Samatar oo u waramayay Idaacadda Kulmiye ee M/Mu qdisho waxa uu ka sheekeeyay heesta Bel edweyne oo uu sheegay in la qaaday san adkii 1973kii, isla markaana uu alifay Abw aan Maxamed Ibraahim Warsame Had raawi.
"Heesta Beledweyne dad badan ayaa na ga soo dalbaday, waayo waxay ahayd tan ugu dheer heesaha kale, waxaana mirahe eda lahaa Cabdi Faarax Jiir” ayuu yiri fan naanka Xasan Aadan Samatar oo sheeg ay tacsi u diray saaxibada geeriyooday ee ay ka wada tirsanaayeen fanka.
Waxa uu sheegay in riwaayadaha la gu dhigi jiray tiyaatarka ay ahaayeen kuwo aad loo jeclaa, waxaana ka mid ahaa: Ga lbeed waa la xoreeyay, ha waalnaado jac aylka, sidaa ma isku qabnaa mise qas annaa iyo kuwo kale.
"Dalka hadduu burburay fankiina wuu burburay, waayo dal kasta fan ayuu dhis an yahay” ayuu yiri AlFannaan Xasan Aadan Samatar oo ka gaabsaday dhibaa tada soo wajahday burburkii ka dib xilli la adeegsanayo teknolojiyo casri ah.
Kooxaha fanka Soomaaliya ayaa inta anu dalka burburin ka hor sanadkii 1991kii waxa uu dalka dibadiisa uga qeyb galay tartamo caalami ah, sida wadamada Shiin aha, Jarmalka Bari, Ruushka, Talyaaniga iyo dalal kale, wuxuuna kaalinta labaad ka galay tartan ka dhacayay dalka Ekwatorial Gini.
Xasan Aadan Samatar oo heesihiisa u dhageystaan Soomaalida waxa uu ku dha shay gobolka Bay isagoona heeso dhowr ah ku qaaday luqadda Mayga ayaa sheeg ay in fankii hore gabdhaha ugu caansan ka mid ahaayeen Khadra, Daahir, Saado Cali, Xaliima Khaliif Magool, Sahro Axmed iyo kuwo kale oo dhammaantood door lix aad leh ku lahaa fanka.
PUNTLAND OO SOO BANDHIGTAY DENBIYADA KA DHACAY DEGAANADEEDA 2019KA
Xafiiska Xeer Ilaalinta Guud ee maa mu lka Puntland, ayaa shaaciyay warbixin ta Denbiyadii ka dhacay Puntland sannad kii tegay ee 2019 oo gaaraya 4379 kiis.
Warbixin kasoo baxday Xeer Ilaalinta, sannadkii tegay ee 2019, waxaa Puntland ka dhacay 162 dil, kuwaasi oo uu kaalinta 1aad kaga jiro G/Mudug, oo ay ka dhace en 59 dil, halka G/Bari oo ku soo xiga ay ka dhaceen 55 dil, G/Cayn ayaa isna wax aka dhacay 19 dil.
Gobollada Nugaal iyo Sool, ayaa waxa sannadkaasi mid walba ka dhacay 9 dil, halka gobolka Karkaar ay ka dhaceen 6 dil, sidoo kale gobolka Haylaan waxa ka dhacay 4 dil, balse gobolka Sanaag ayaa sannadka oo dhan lagu dilay hal qof oo keliya, sida ku xusan Shaxada Xeer Ilaal inta Puntland.
Denbiyada Kufsiga ee Puntland ka dhacay sannadkii tegay, ayaa lagu sheeg ay 90kufsi, waxaana hoggaaminaya gobo lka Nugaal oo ay ka dhaceen 30 kufsi. G/Bari oo ku soo xiga ayaa laga dii waangeliyay 18 kufsi, iyadoo gobolka Mu dugna ay ka dhaceen 13 kufsi.
Dagaalladii Puntland ka dhacay 2019, ayaa sida Xeer Ilaalintu sheegtay, waxaa ku dhintay 212 qof, kuwaasi oo 63 kamid ah ay ku dhinteen dagaallo ka dhacay gob olka Cayn, gobolka Karkaar oo ku soo xig ana, ay ku dhinteen 55, halka gobolka Bari oo kaalinta saddexaad ku jita ay ku dhint een 46 qof.
BOQORKA CUSUB EE CUMMAN OO LAGU DHAWAAQAY KA DIB GERIDII BOQOR QABOS
Haitham bin Tariq Al Saciid ayaa loo Magacaabay inuu noqdo Hoggaamiyaha cusub dalka Cuman ka dib dhimashadii in aadeerkiis Sultan Qaboos bin Saciid Al Saciid, sida ay ku warantay Warbaahinta Gudaha ee Cuman.
Wasiirkii hore ee dhaqanka ayaa la dhaariyey ka dib markii ay soo gudbiyeen qoyska Boqortooyada. Dastuurka Omani wuxuu dhigayaa in qofka guuleysta uu u m agacowdo qoyska boqortooyada sedex maalmood gudahood markii carshiga uu baneeyey. Suldaanka waa inuu xubin ka ahaad aa qoyska boqortooyada sidoo kale waa in uu ahaada "Muslim, qaan gaar, ca qli gal ah. Sultan Qaboos bin Saciid Al Sa ciid oo ahaa boqorkii dalka Cumaan ayaa geeriy ooday, isaga oo ay da’diisu tahay 79 jir.
Sultan Qaboos waligii ma guursan, isla mar kana Boqorka oo ahaa ninkii uu xuk unkii su ugu waqtiga dheeraa dunida Car abta ayaa geeriyooday isaga oo aan maga ca abin ciddii badali lahayd.
DALAL AY KU JIRTO SOOMAALIYA OO WAYN DOONA CODKII AY KU LAHAAYEEN QM
Q/Midoobey ayaa sheegtay in 7ba wa ddan oo xubno ka ah Q/Midoobey ay wey nayaan codkii ay ku lahaayeen fadhiy ada ay guud ee golaha.
Afhayeenka QM Staphane Dujarric ay aa sheegay in todoba dal oo ay Sooma aliya ku jirto ay ka mid noqdeen dalal ka codadka buuxa ku waynaya fadhiy adda golaha guud ee Q/Midoobey.
Sababta waxaa uu afhayeenku ku shee gay in dawladaha an ay bixin waayeen qaa raan sanadeed ka Q/Midoobey, taasina ay keentay in fadhi gaar ah laga yeesho.
Afhayeenku waxa uu sheegay in xub naha golaha guud ee QM.oo ka kooban 193 wadan in la go’aamiyay in dalalka So omaaliya, Lubnan, Finuswella, Jamhuuri yadda Afrikada dhexe, Yemen, Gambiya, jasiiradaha Komoros iyo dalal kale inay waayeen codka buuxa oo ay fadhiyadda Q/Midoobey ku lahaayeen.
Waxa ka horeeya bisha September ee sanadkaan ayay dawladahaan Soomaal iya ku jirto fursad u haystaan inay iska bax shaan lacagta qaaraan sanadeedka ah ee Q,M haddii waxaa ay luminayaan codka ay Q,M ku leeyihiin.
Qodobka 19aad ee sharciga QM ayaa dhigaya in dalkii muddo 2sano ah bixin waaya qarashka sanadka uu waynayo cod kiisa uu fadhiyada ku leeyahay, hase yee shee dawladaha waxaa u furan inay cud urdaartaan marka dhibaato qabsato.
Dalalka liiskan ku soo baxay qaarkood sanadkii lasoo dhaafay dhibaato dhaqaale ayaa ku habsatay waxaana dalalkaas qaar kood dantu ku qabsatay inay wadankooda ka qaxaan dhaqaalo xumo darteed.
AJAANIBTA KU NOOL GOBOLKA NORTHERN CAPE OO LOO HANJABAY
12 saacadood Ayaa loo qabtay ajaan ib ta ganaciyada ku leh magalamadaxda go bolka Northern Cape ee Upington
Ciidamada booliska gobolkaas Ayaa galinkii dambe ee Shalay badbaadiyay dhowr qof oo ajaanib ahaa kuwaaasi oo qudha laga jari rabay 2dii maalimood ee laso dhaafay rabshada xoogan Ayaa gobolkaas Northern Cape ka asi oo ajaanibta lagu beegsanayay iyado lagu eedeeyay ajaan ibta laguna tuhunsan yahay dil loo geey stay askari booliska oo ka howlgalayay magalada Upington
Habeen hore boqolaal ajaanib ah oo u badan somali Ethiopian Bangladesh Ayaa magan ga liyo ahaan loo dajiyay saldhigy ada bo oliska gobolkaasi Notheren cape cabsi la ga qabo in weerar lagu ekeeyo goobaha ay ajaanibta ku noolyihiin
Boqolaal ganacsato ah Ayaa lagu qas bay in hantidooda ama ganacsigooda oo camiran ay ka cararaan halka qaarkoodna ay nasiib u heleen in dukaamahooda ay rartaan Xaalad cabsi iyo walwal leh ayey Habeen hore ku suganyihiin ajaanibta ganacsiya da ku leh gobolka Northern Cape
Saraakiisha booliska gobolka Ayaa wa cad ku maray in ay ku dadaali doonaan si dii ay u xakameeyn lahayeen dadweyna ha ka careeysan dilka booliska loo geeys tay Somalis In South Africa
XILDHIBAANADA CUSUB EE GALMUDUG OO LAGU DHAARIYAY DHUUSAMAREEB
Xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Galmudug ayaa waxaa Shalay lagu dha ariyay munaasabad ka dhacday M/Dhuu samareeb ee Xarunta Maamulka Galm udug.
Guddiga Farsamada ee dhismaha Galmu dug ayaa waxay Jimcihii soo bandhigeen liis ay ku qoran yihiin magacyada 83 xubn ood oo ka mid ah 89 xubnood ee Baarla maanka Galmudug uu ka kooban yahay.
Sida ay sheegeen Guddiga Farsamada waxay lixda xubnood ee ka harsan tirada guud ee Baarlamaanka Galmudug, ay soo bandhigi doonaan, marka ay u soo gudbiy aan Odayaasha Dhaqanka, ee ku hawlan soo xulista Xildhibaanada.
Inta badan Xildhibaanadan oo lagu mu runsan yahay dhabaha loo maray soo xuli stooda ayaa waxay Shalay Kitaabka Alle ugu dhaarteen inay si daacada ugu adeeg gi doonaan dalka iyo dalka.
M/Dh/mareeb ayaa waxaa ka taagan dii dmo ay Odayaasha Dhaqanka ee beelaha degga Galmudg qaarkood ka keeneen soo xulista Xildhibaanada Baarlamaanka, kuw aa oo ku doodaya in la musuq maasuqay.
Beelaha qaarkood ayaaba sheegaya in laga musuq maasuqay qoondadii ama kur aastii ay ku lahaayen Baarlamaanka Gal mudug.Madaxweynaha Galmudug, Axmed Ducaale Geelle (Xaaf) oo si adag uga soo horjeestay Xildhibaanada looga dhawaaq ay M/Dh/mareeb ayaa sheegay inay la xis aabtami doonaan ciddii ka dambeysay.
CABSI LAGA QABO IN ALSHABAAB WEERAR AAN MEELO KA MID AH KENYA MARKALE
Saraakiisha Ciidamada Booliska Kenya ayaa sheegay iney feejignaan dheeri ah ay geliyeen Ciidamada ammaanka Waqoo yi Bari Kenya ka dib markii Kenya ay ka war heshay dagaalyahano ka tirsan AlShabaab oo weerar la damacsan Gobo lkaasi.
Ciidamo dheeraad ah oo isugu jira Bo olis iyo Militari ayaa lagu xoojiyay degaan ka ElwakKotulo iyo wadada dheer ee xir iirisa M/Mandheera iyo degaankaasi.
Gudoomiyaha G/Waqooyi Bari Kenya ayaa ku dhawaaqay in heegan buuxa la geliyay Ciidamada kala duwan.
Waxaa uu sidoo kale sheegay inay hel een xog ku aaddan in AlShabaab ay doon aayaan in ay weeraraan gobolka.
"Ciidamo badan ayaan geynay degaa no duleedka ka ah D/Mandheera si looga hortago falal lidi ku ah ammaanka oo ka yi maadaAlShabaab”.Ayuu yiri Gudomiyaha
Dhanka kale booliska Kenya ayaa soo saaray digniin ku aaddan weeraro ka yim aada AlShabaab oo ka dhaca Magaalo Xeebeedka Mombaza ee dalka Kenya.
SAMIIRA AXMED OO KU GUULEYSATAY DAC WAD AY KUSOO OOGTAY BBCDA
Samiira Axmed oo tabin jirtay barnaa mij ka baxa BBCda ayaa ku guuleysatay dacwad ay kusoo oogtay BBCda, oo ku saabsan dood la xiriirtay in mushaaraadka shaqaalaha la simo.
Gabadhan ayaa sheegtay in mushaar aysan u qalmin la siin jiray xilli ay BBCda ka qaban jirtay barnaamijka ra'yi aruurinta ee lagu magacaabo Newswatch, kaasoo ay ku tilShalayy mid aad u yaraa marka la barbar dhigo mushaarka uu qaadan jiray wariye Jeremy Vine, oo isagana qaban jir ay barnaamijka Points of View.
Go'aanka laga soo saaray dacwaddan ayaa lagu sheegay in "shaqada gabadhan ee barnaamijka Newswatch ay la mid tah ay shaqada uu qabto Jeremy Vine oo mar tigaliya barnaamijka Points of View, iya doo la eegayo qodobka 65(1) ee xeerka si mitaanka mushaaraadka shaqaalaka, oo lasoo saaray sanadkii 2010kii".
Samiira ayaa sheegtay in hadda ay far axsan tahay, maadaama xal laga gaaray dacwaddaas.
"Ma jirto haweeney dooneysa inay dac wad kusoo oogto shirkaddii ay horay shaq aalaha ugu ahayd", ayey tiri, iyadoo intaas na ku dartay: "Waan jeclahay inaan u sha qeeyo BBCda".
Maamulka BBCda ayaa yiri: "Waan og nahay in dacwadaha shirkadaha dhexdoo da lagu qaado aysan ahayn kuwo farxad galinaya dhammaan dhinacyada ay khus eyso. Waxaan dooneynaa inaan si wadajir ah ula shaqeyno Samiira, annagoo xalka u heleyna qaab taban".
Samiira Axmed waxay u mahad celisay ururka midowga suxufiyiinta ee (NUJ) iyo kooxdeeda dhinaca sharciga, iyadoo mah ad taas la mid ahna u jeediyay dhammaan raggii iyo dumarkii ku taageeray ololaheda
Wariyahan ayaa sheegtay inay ka maqn eyd lacag dhan £700,000. Laakiin BBCda ayaa ku jawabatay in iyada iyo wariye Vi ne ay qaban jireen "doorar shaqo oo aad u kala duwan".
Garsoorka ma aysan caddeynin in Sa miira ay heli doonto lacagta ay sheegatay inay ka maqan tahay. Waxay garsooku sheegeen in go'aanka ay soo saareen uu dhigayo in la simo qandaraaska ay Sam iira mushaarka ku qaadan jirtay intii u dha xeysay 1 October 2012 ilaa 30 September 2018 iyo kii uu qaadanayay wariye Jeremy Vine, intii u dhaxeysay 2008 ilaa July 20 18". Waxay gabadhan ku doodeysay in la gu sameeyay cunsuriyad dhinaca jinsiga ah, maadaama ay haweeney tahay, wariy aha ka mushaarka badnaana uu rag ya hay.
Maamulka BBCda ayaa sheegay in Sa miira ay ahayd wariye shaqo fiican qaban jirtay, ayna ka qoomameynayaan in kiisk an uu gaaray heer dacwadeed. hayaha gu ud ee ururka midowga suxufiyiinta ee NUJ Michelle Stanistreet ayaa sheegtay in Sam iira ay geesinnimo weyn sameysay markii ay dacwaddaas gudbisay.
Dadkii kiiskan taageeray ee fikirkooda uga hadlay Twitterka ayaa la shaaciyay.
Samiira ayaa guddiga dhageysanayay dac wadda, oo dhammaatay bishii Nofember, u sheegtay inay fahmi weysay sababta iya da iyo wariyaha ninka ah loo simi waayay mushaaraadkooda.
Vine ayaa lacag dhan £3,000 oo gini ku qaadan jiray halkii xalaqo ee uu ka tabiyo barnaamijka BCda ee "One's Points of Vi ew", intii u dhaxeysay sanadihii 2008dii ilaa 2018kii.
Hase ahaatee Samiira ayaa barnaamijk eeda Newswatch, halkii xalaqo lagu siin ji ray lacag dhan £440 gini.
Mesut Ozil Oo Ka Sheekeeyey Layaab kii Ku Dhacay Markii Ay Arsenal Tabab
araha U Magacowday Mikel Arteta
Arteta ayaa afar ciyaarood oo uu hogg aamiyey Gunners, waxa uu ku hog gaamiyey laba guulood iyo hal barbarro ah, iyo mid kaliya oo laga adkaaday, laak iin bandhigga guud ee kooxda ayaa u mu uqda inuu soo laabtay hannaankii ciya areed ee lagu yaqaanay.
Ozil oo ka mid ah xiddigaha dib usoo noolaaday, waxa ay hore isku koox usoo ahaayeen Mikel Arteta ka hor intii aanu tababaraha haddu ka tegin Emirates, mag acaabistiisuna waxay laacibka reer Ger many ku noqotay layaab.
"Waan yara yaabay laakiin dhinaca kale, waqtigu si dhakhso ah ayuu u duul ayaa waxaanan xasuustaa markii uu Pep Guardiola kala soo shaqeeyay Man City, waxayna iska cadahay inuu dhakhso u noqon doono tababare.” Sidaas ayuu yidhi Ozil.
"Waan ku faraxsanahay inuu halkan nala joogo waqtigan sababtoo ah waa wa qtigii ku habboonaa. Dhamaantayo waanu ku faraxsanahay inuu nala joogo.
Waxa aanu leenahay xidhiidh caadi ah. Waxaanu ahayn isku koox, in badan ayaanu is ixtiraamnaa, horena waxa uu u ahaa kabtanka kooxda waqtigaas sida caa diga ahna ciyaartoygu way is xushmee yaan, haddana wuxuu wadaa inuu taas dhiso.” Ayuu ku daray.
DOORASHADA TAIWAN: TSAI INGWEN AYAA MAR LABAAD KU GUULEYSATAY XILKA DALKAAS
Madaxweynaha Taiwan Tsai Ingwen ayaa mar 2aad ku guuleysatay xilka dalka as, iyadoo doorashada Taiwan ay hareys ay xiriirka ay jasiiraddu la leedahay Shiina ha.
Codadkii la tiriyay, Ms Tsai waxay ka heshay 57%, iyadoo aad uga horreysa ninka la tartamayay ee Han Kuoyu.
Ms Tsai ayaa ka soo horjeedda xiriir dhow oo lala yeesho Shiinaha, halka Mr Han uu rumeysan yahay in xiriir lala ye esho Shiinaha uu sare u qaadayo dhaqa alaha dalkaas. Khudbaddii ay jeedisay, Ms Tsai ayaa waxay u sheegtay Shiinaha inuu ka tanaasulo hanjabaaddiisa ah inuu jasiiradda si xoog ah u soo ceshan doono.
Weriyaha BBC John Sudworth oo ku su gan Taiwan ayaa sheegaya in natiijada do orashada ay dharbaaxo weyn ku tahay Bei jing. Damaceeda ah midow ballaaran oo Shiinuhu yeesho ayaa si weyn loo qaada cay.
Ms Tsai ayaa shir jaraa`id ka tiri: "Taiw an waxay dunida tusineysaa sida aan u jecel nahay inaan dimuqraadiyad ugu nool aado iyo sida weyn ee aan u jecel nahay dalkeenna" Shiinaha ayaa sheegay inuu maamulo Taiwan tan iyo dhammaadkii da gaalkii sokeye ee Shiinaha sanadkii 1949. Waxay sheegtay in Taiwan ay tahay inay qasab ku aqbasho dib ula midoobidda Shii naha, haddii kalena xoog loo adeegsan doono.
Ms Tsai ayaa sheegtay in Shiinaha ay tahay inuu haatan ka laabto hanjabaadd aas. Mr Han, oo ahaa musharraxii xisbiga Kuomintang, ayaa oggolaaday in laga guul eystay. Ka hor codbixinta, Ms Tsai ayaa ku horreysay qiimeyn la sameeyay iyadoo codbixiyeyaashu ay arkeen sida ay Beijing u maareysay dibadbaxyada dimuqraadiy adda lagu doonayo ee ka dhacay Hong Kong.
Dadka ka soo horjeeda in Taiwan ay la wareegto Shiinaha ayaa taageersan haw eeneydan. Madaxweyne Tsai ayaa ku adk eysaneysa in go`aanka mustaqbalka Tai wan uu u yaallo 23ka milyan ee dalkaasi ku nool.
Hadda waa sidee xaalka Taiwan?
Taiwan caadi ahaan hadda waa dal mad ax bannaan waxay leedahay dowlad la soo doortay oo u gaar ah, dastuur iyo mila tari. Balse Shiinaha ayaa diiddan inay xir iir diblomaasiyadeed la yeelato dal walba oo Taiwan u aqoonsan dal madax banna an. Balse dhowr dal ah ayaa ku raacay Beijing, balse badankood xiriir aan cadd eyn ayay la leeyihiin Taiwan oo dhanka ganacsiga ah. Xigasho:BBC
DONALD TRUMP OO BALLAARINAYA XANI BAADA SAFAR EE DALALKA ISLAAMKA IYO XISBIGA DIMUQRAADIGA OO KA HORTAGAYA
Sharci dejiyaasha dimoqraadiga iyo ko oxaha xuquuqda madaniga ah ayaa si we yn u hadal haya qorshooyinka Aqalka Cad ku doonayo in uu ballaariyo xayiraada safar ee lagu bartilmaameedsanayo wadd amada muslimiinta ah ee aqlabiyadda ku leh dalal dhowr ah.
Xayiraadda maamulka Trump ee soc daalka ee saaran toddobo waddan oo mu slim ah, ayaa si weyn loogu kordhin karaa illaa iyo toddobo dal oo dheeri ah, sida ku xusan dukumiintiyo la helay oo dhigaya xayiraad la ballaariyey iyo xannibaado kale.
Sharcidajiyayaasha Muslimka ah Ra shida Tlaib iyo Ilhan Omar, ayaa si adag u dhalleeceeyay qorshahaan, waxayna ku baaqeen in la meel mariyo sharciga federa alka ee mamnuucaya xayiraada Trump.
"Ma jirto Sugitaan dambe, Muslimiin aad u tiro badan ayaa si ula kac ah loo bar tilmaameedsaday,loo takooray,lakala ge eyay qoysaskooda, waxaana loo diidey fur sadaha kaliya ku saleysan diintooda. Ayay tiri Rashida Tlaib.
Waqtigan xaadirka ah, u safridda Mar eykanka waxaa ka mamnuuc ah waddama da sida weyn loo yaqaan ee Muslimka ah ee Iran, Libya, Soomaaliya, Syria iyo Yem en. Safarka sidoo kale waa ka mamnuuc Venezuela iyo North Korea.
Wadamada cusub ee uu saameeyay xayiraada ayaa waxaa ka mid ah Ciraaq, Suudaan iyo Chad, oo lagu soo daray cu naqabateyntii maamulka Trump ee bilowgii 2017, laakiin markaas hoos loo dhigay.
RW KHEYRE & WAKIILKA QM OO KULAN XASAASI AH YEESHAY
Ra’iisul Wasaaraah Xukuumadda Federaalka ah ee Soomalaiya Xasan Cali Kheyre ayaa Magaalada Muqdisho Muqdisho waxaa uu kulan kula qaatey Ergayga Qaramada Midoobay ee Soomaaliya, James Swan.
Kulanka ayaa labada masuul waxaa ay uga ka wada hadlaeen qodobbo ay ka mid yihiin arrimaha mudnaanta qaran leh ee 2020 iyo sida ugu habboon ee Qaramada Midoobay u taageeri karto ahdaafta dalku uu leeyahay.
Ra’iisul Wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa Qaramada Midobey uga mahad celiyey taageerda ay siiyaan Soomaaliya iyo doorka ay ku leeyihiin arrimaha Amniga iyo dooraashooyinka.
Wakiilka Qaramada Midoobey ee Soomaaliya Amb, James Swan ayaa sheegay in Qaramada Midoobey ay mar walba ay sii wadi doonto taageerada ay siiso Soomaaliya ee dhinacyada,Amniga iyo dhaqaalaha dalka Soomaaliya.
DIGNIIN LAGA SOO SAAREY DOORASHADA GALMUDUG
Weli waxa cabasho kala duwan ka imaaneysaa qaar kamid ah beelaha dega deegaannada Galmudug,kuwaas oo sheegay in Odayaashii saxiixayaasha Galmudug ee soo xulayey Xildhibaannada Galmudug la bedeley.
Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Galmudug Ibraahim Xasan Guureeye ayaa sheegay in dowladda Federaalka ay si cad u baal martay shaqsiyaad ka yimid Beelaha Galmudug qaarkood oo ay soo xusheen,isla markaana la bedeley.
Waxaa uu sheegay ,isaga oo lahadlayay Risaala in uu ka digayo hadii la qabto doorashada Galmudug inay keeni karto arrimo ay kamid yihiin Amni darro.
Ugu dambeyn waxaa uu sheegay in dadka loo soo xulay xildhibaannada Cusub ee Galmudug lagu keenay si saaxiibtinimo ah oo ay mas’uul ka yihiin Madaxda Dowladda Federaalka Soomaaliya.